दोलखाका यी से’क्सी प्रिन्सिपल, आफ्नै घरमा पढ्न बसेकी किशोरीलाई गरे ब’लात्कार ! – हाम्रो देश
दोलखाका यी से’क्सी प्रिन्सिपल, आफ्नै घरमा पढ्न बसेकी किशोरीलाई गरे ब’लात्कार !
काठमाडौं – हाम्रो समाजमा शिक्षकको स्थान निकै उच्च हुन्छ। शिक्षकलाई गुरु समेत भन्ने गर्छौं। कयौं शिक्षकहरु यस्ता थिए कि उनीहरुको अहिलेसम्म उदाहरण दिइन्छ। तर, अर्कोतर्फ अहिले केही शिक्षकले आफ्नो म’र्यादा नै भुल्न थालेका छन्। दोलखाका बैतेश्वर गाउँपालिकास्थित हनुमन्तेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक (प्रिन्सिपल) गोपालध्वज श्रेष्ठको क’र्तुत बाहिरिएको छ। यौ’न पि’पासु श्रेष्ठले आफ्नो मा’र्यादा ना’घेपछि शिक्षक शब्दलाई नै क’लंकित बनाएको छ।
आफैले पढाएको विद्याथीलाई ब,’लात्कार गरेको आरोप प्रिन्सिपल श्रेष्ठमाथि लागेको छ। प्रिन्सिपल श्रेष्ठले किशोरीलाई ज’बर्जस्तीक’रणी गरेको म्यासेन्जरको ‘स्क्रिनसट’ पी’डित विद्यार्थीका आफन्तमार्फत प्राप्त भएको छ। प्राप्त फेसबुक म्यासेजमा श्रेष्ठले पी’डितलाई कहिलेकाहिँ यस्तो हुन्छ नि भन्दै सम्झाउन खोजेका छन्।
पी’डित किशोरीले भने ‘थु’क्क तपाईलाई ला’ज नभएको हेडसर, सबैको अगाडी बे’इज्जत गर्दिन्छु’ भन्दै म्यासेज गरेकी छन्। श्रेष्ठले श्रीमतीलाई दोलखाको का’ब्रेबाट तराई (माईती) पठाएको मौ’का छो’पेर आफैले पढाएको विद्यार्थीलाई ब,’लात्कार गरेको पी’डितको भनाइलाई उद्धृत गर्दै आफन्तले जानकारी दिए।
पी’डितका मामाले कि’शोरीलाई पढ्नका लागि प्रिन्सिपल श्रेष्ठको घरमा कोठा लिएर राखेका थिए। उक्त कोठा समेत श्रेष्ठले निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए। छोरी जस्तै पालेर राख्छु भन्दै क’बुल गरेका श्रेष्ठले आफ्नै विद्यार्थीलाई ब,’लात्कार गरेको बात लागेको हो।
श्रेष्ठले पटक–पटक गो’प्य अंगमा छुने, केहि हुँदैन भन्दै टाउकोमा हात राखेर क’सम खाएको पी’डितले बताएकी छन्। पी’डित कि’शोरीका अनुसार प्रिन्सिपल श्रेष्ठले यो कुरा बाहिर ल्याए आ’त्मह,’त्या गर्ने ध’म्की समेत दिएका थिए। १४ वर्षीय पी’डित किशोरी सोही स्कुलमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत थिइन्। प्रिन्सिपल श्रेष्ठले ब,’लात्कार गरेको बताउँदै पी’डित कि’शोरी र आफन्तहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखामा जा’हेरी दिने लागेका छन्। यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखाले केही बताएको छैन।